बैंक कर्जाको कडाइले घट्यो अटो व्यापार | गृहपृष्ठ
Home यातायात बैंक कर्जाको कडाइले घट्यो अटो व्यापार
on: १ माघ २०७५, मंगलवार १०:०७ यातायात
काठमाडौं । सर्वसाधारण नेपालीले सामान्यतया बैंक कर्जाको माध्यमबाट निजी गाडी चढ्ने गरेको पाइन्छ । सवारीसाधन खरीदका लागि बैंकबाट कर्जा लिने ग्राहक पछिल्ला वर्षमा बढेका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक अन्त्यमा सवारीसाधनको कर्जा ६५ प्रतिशतबाट झारेर ५० प्रतिशत बनाएपछि भने अटो बजार घटेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
कति घट्योे अटोबजार ?
गत फागुन १० मा ५० प्रतिशत मात्र अटोलोन उपलब्ध गराउने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । त्यसलगत्तै व्यवसायीले अटोलोनमा गरिएको कडाइले बजार खस्किएको भन्दै कर्जा खुकुलो बनाउन माग गरेका थिए । व्यवसायीको माग अनुसार नै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति मार्फत अटोलोनको सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । अटोलोनमा गरिएको उक्त कडाइको करीब ६ महीना अवधिमा मात्रै अटोबजार ६० प्रतिशत घटेको व्यवसायीको भनाइ थियो । गत कात्तिकदेखि बैंक कर्जामा पुनः कडाइ गरिएसँगै अटोबजारमा हलचल शुरू भएको छ । त्यसयता कम्तीमा ३० प्रतिशत व्यापार घटेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
के भन्छन् कम्पनीहरू ?
बुक भइसकेका केही गाडीको समेत विक्री नयाँ अटोलोन नीतिपछि रोकिएको सांग्रिला मोटर्सका एक प्रबन्धकले बताए । निशान÷ड्याट्सनको आधिकारिक विक्रेता पायोनीयर मोटोकर्पले पनि अटोलोनमा कडाइपछि बजार आधा घटेको बताएको छ । पहिले मासिक ५० ओटासम्म गाडी विक्री भइरहेकोमा हाल २५ गाडी बिक्न पनि मुश्किल भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार अटोबजार खस्किनुको कारण अटोलोनमा कडाइसँगै त्यसको ब्याजदर वृद्धि पनि हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ अटोलोन नीतिपछि व्यापार ३० प्रतिशत घटेको छ ।
पहिले ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने अटोलोन अहिले १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले पनि बजारमा असर पारेको गाडी विक्रेताहरू बताउँछन् ।
किन गरियो अटोलोनमा कडाइ ?
राज्यले अटो क्षेत्रलाई शुरूमा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा हेरेको थियो । तर आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जामा कडाइ गरिएको थियो । आव २०७५/७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमा यसलाई केही खुकुलो पारिए पनि पुनः यसको त्रैमासिक समीक्षापछि अटोलोनमा कडाइ गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उक्त नीतिमा विद्युतीय सवारीसाधनको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ ।
के भन्छ नाडा ?
हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक सवारीसाधन यातायातको प्रमुख तथा सुलभ माध्यम हो । विश्व परिवेशमा सवारी साधन अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत भएका छन् । सरकारले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको भए पनि सवारी साधनलाई विलासिताको श्रेणीमा राखेर कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र मजबूत बनाएको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारका अन्य निकायले अटोमोबाइललाई अनुत्पादक भनेकोमा छन्, तर त्यसप्रति हाम्रो विमति छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखाउँछ । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रलाई कर्जा दिन अटोमोबाइल क्षेत्रलाई दोष दिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनको कर्जामा ५० प्रतिशतको क्याप लगाउनुलाई हामीले यही अर्थमा बुझेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनको आयात घटाउन सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा कर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । बैंकको ऋण असुली हेर्ने हो भने अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो । बैंकले गरेको लगानी समयमै फिर्ता भइरहेको छ । यस्तो सजिलो क्षेत्रमा त १० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ९० प्रतिशत फाइनान्स हुनुपर्छ । नेपालको १२ खर्बको आयातमा करीब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पाँच वस्तुमध्ये सवारीसाधन चौथो स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८६ अर्ब ३० करोडको सवारीसाधन आयात भएकोमा त्यसबापत सवारीसाधनले सरकारलाई १ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाएको यथार्थ बेवास्ता गरिएको हाम्रो बुझाइ छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढे इन्धन लगायतका लागि विदेशिने ठूलो रकम रोकिने सरकारको अपेक्षा छ । साथै यस्ता गाडी वातावरणमैत्री, दिगो र तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अन्य गाडीमा ३०० प्रतिशत सम्म भन्सार कर रहेकोमा सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सडक मर्मत सुधार कर यी सवारी साधनमा छूट गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा ३०० ओटा यस्ता बस किन्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । ‘अन्य गाडीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने, ‘विश्व विद्युतीय सवारीको उत्पादन र प्रयोगमा सक्रिय भइरहेको बेला नेपाल सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर छ ।’ तर आवश्यकता अनुसार चार्जिङ स्टेशन तथा विद्युत् उत्पादन नहुँदा विद्युतीय सवारीले गति लिन भने सकेको छैन ।